Dhirta dawooyinka | September 2019
Sida loo abuuro oo u koro catnip beerta
Kotovnik - geedo yar-yar oo wakhti yar leh ur wanaagsan. Waxaa iska leh qoyska Lambskin. Kotovnik waxaa loo tixgeliyaa geedka malab wanaagsan waxayna leedahay bogsiin. Kotovnik: sharaxaadda warshadda Waxaa jira in ka badan 200 nooc oo catnip ah. Cat kotovnik - mid ka mid ah wakiilada caankan. Waxa kale oo uu leeyahay magacyo kale - liin ama liin.
Kotovnik: guryaha dawooyinka iyo codsiga daawada dhaqameed
Cawska cagaaran (matoshnik, shandra karootada ah, beertii beertu) waa geedo badan oo ka mid ah qoyska Labiotus. Cudurka Kotovnik ayaa si ballaaran loo isticmaalaa daawada. Guryaha dawooyinka ayaa ka qaybqaatay xaqiiqda ah in beedka beeruhu si gaar ah ugu koray Maraykanka iyo Kanada. Marka la eego xaaladaha dabiiciga ah waxay ku koraan wadooyinka dhexe ee Eurasia.
Faa'iidooyinka iyo waxyeellada yaryar ee caanaha
Yamaasyada caanaha ayaa leh labadaba daaweyn iyo dawooyinka kale ee loo isticmaalo. Bannaanka u badan bilaabay inay koraan warshad this. Inkasta oo yamaaruggii caanaha ee sawirku uu u eg yahay qodax caadi ah, waa inaad si taxadar leh u fiirsataa - dhirta ayaa saameyn aad u faa'iido leh ku leh jirka bani'aadamka ee daaweynta cudurrada kala duwan.
Cunto-dilaac aan qabyo ahayn: Cudurka Euphorbia (qaababka beeritaanka iyo daryeelka)
Beeraley kastaa waxay raadineysaa warshad sariirta oo aan u baahnayn daryeel gaar ah waxayna u dulqaadaneysaa xaaladaha cimilada. Intaa waxaa dheer, waxaa muhiim ah in warshad uma baahnid in lagu beeray sanad walba ama la soo celiyo. Cunto noocan oo kale ah waa cypress euphorbia. Cinwaanka Botanical Euphorbia Cypress (laga bilaabo Latina Euphórbia cyparissias) waa geedo daaqsin ah oo laga helo Euphorbia (Euphorbia), Euphorbiace Euphorbiace (Euphorbiaceae).
Isticmaalidda baikal Baikal ee daawada dhaqanka
Maqaalkani waxa uu diiradda saarayaa warshadda, taas oo aan la aqoonsanayn daawada dhaqanka, laakiin weli waxaa loo isticmaalaa cuntooyin badan oo caan ah. Geedkan waxaa lagu xusay daaweynta Tibetan ee "Zhud Shi", kaas oo u heellan inuu bogsoodo, iyo sidoo kale ku jira 50 dhirta dawooyinka ee loo isticmaalo dawooyinka Shiinaha.
Faa'iidooyinka iyo waxyeellada geedo sacfraan ah
Ololaha beeritaanka ee Redhead ma aha mid ka mid ah qaybaha hoose ee boqoshaada, sida, laga yaabo, aad isla markiiba ku fikiray. Warshad Tani, oo hadda si firfircoon loogu beeray laba qaybood oo muhiim ah: badeecad asalka ah ee soo saarista saliidda iyo sida geedka malab. Waxaan sii kordheynaa bilawga inaan dib u eegno, inaan dib ugu soo celino cuntooyinka duugoobay, sidaas darteed waa inaad ka barataa wax badan oo ku saabsan suurtogalnimada dhirtaas.
Qalabka daawada ee saxaro (gorkusha)
Dhirta badan, marka lagu daro hawlaha qurxinta, waxay sidoo kale leeyihiin saameyn daaweyn ah oo ku saabsan jirka aadanaha. Mid ka mid ah waa sausurey, ama niyad jab. Tani ma aha geedaha ugu quruxda badan ayaa helay sumcad weyn oo ka dhex jira daawooyinka dhaqanka. Aynu ogaanno waxa ay u eg tahay, sida ay waxtar u tahay, sida loo diyaariyo, iyo haddii ay jiraan wax ka horjeeda isticmaalka bolse.